Nantsoina ho fanaovana hazalambo ny fisamborana mpiaro ny tontolo iainana bebe kokoa any Kambôdza · Global Voices teny Malagasy
Nosamborina noho ny fakana sary ranon-dolana mankany an-drenirano ireo mpikatroka
Voadika ny 22 Jona 2021 3:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, Español, Dansk, Ελληνικά, English
Nilaza ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa mpikatroka Reny miisa telo no nilaza momba ny rano maloto mikoriana mankany amin'ny Tonle Sap, mitovy amin'ity tatatra nalaina sary tao amin'ny sisin-dreniranon'i Phnom Penh tamin'ny 17 Jona 2021 ity. Sary sy fanazavana avy amin'ny VOD English
Ity lahatsoratra nosoratan'i Mech Dara ity, miaraka amin'ny tatitra fanampiny nataon'i Michael Dickison, dia navoaka voalohany tao amin'ny VOD News, tranokalam-baovao tsy miankina any Kambodza, ary navoaka indray ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mpikatroka miisa efatra avy amin'ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana Mother Nature no nosamborina tany Kambodza tamin'ity herinandro ity taorian'ny nanambaran'ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny Minisiteran'ny Atitany fa nampiasa vola vahiny ny vondrona “mpikomy” mba hanonganana ny governemanta.
Ny 18 Jona, samy tsy azo hihainoana ny heviny momba ny raharahan'ireo voasambotra ireo na ny mpitondratenin'ny Pôlisim-pirenena Chhay Kim Khoeun na ny mpitondratenin'ny fitsarana monisipaly.
Tamin'ny 16 Jona, telo tamin'ireo mpikatroka mafàna fo no voalaza fa naiditra am-ponja ao Phnom Penh ary ny iray fahefatra any amin'ny faritanin'i Kandal, saingy nilaza anefa i Kim Khoeun tamin'ny 17 Jona fa olona telo ihany no nosamborina.
Nilaza ny Ivontoerana Kambodziana misahana ny Zon'olombelona, ​​tamin'ny alàlan'ny fampandrenesana navoaka ny Alakamisy fa samy mpikambana ao amin'ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana Mother Nature avokoa ireo mpikatroka miisa efatra. Naka sary ny rano maloto mikoriana mankany amin'ny renirano Tonle Sap ireo olona miisa telo nosamborina tao Phnom Penh, hoy ny Ivontoerana.
Nisy mpikatroka avy ao amin'ny Mother Nature miisa telo hafa nosamborina tamin'ny volana Septambra lasa teo ary nohelohina [mg] noho ny fihantsiana tamin'ny volana lasa teo.
Nilaza i Kim Khoeun tamin'ny 17 Jona fa ireo mpikatroka mafàna fo miisa telo nosamborina tamin'ity herinandro ity dia mety hiatrika fiampangana henjana kokoa noho ny fanaovana tetidratsy iraisana, izay mahazo sazy dimy ka hatramin'ny 10 taona an-ranomaizina.
Ny zoma, nilaza ny mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Atitany Khieu Sopheak fa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala no politikam-panjakana ary izay no iandrasany ny fidiran'ny olona, ​​ao anatin'izany ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, manana izany tanjona izany. Hoy i Sopheak:
Saingy hafa ity vondrona ity ary manana porofo ny manampahefana fa nahazo vola vahiny hanatanterahana hetsika fikomiana handrisihana [olona] hanonganana ny governemanta izy ireo. Manana antontan-taratasy ampy hisamborana azy rehetra ireo izahay. Miangavy azy rehetra ireo mba handeha hamaha izany any amin'ny fitsarana ary haka mpisolovava mba hiaro azy ireo. Avy aiza no nahazoan'izy ireo ny volany? Inona no nampiasan'izy ireo izany vola izany ary inona no tanjona? Raha tena miaro ny tontolo iainana tokoa izy ireo dia faly izahay miara-miasa aminy.
Nilaza ny mpiara-manorina ny Mother Nature, Alejandro Gonzalez-Davidson, izay noroahina avy tany Kambodza tamin'ny 2015 ary monina any Espaina ankehitriny, fa “fitondrana jadona be ahiahy loatra” ny governemanta raha ny “fakana ny sarin'ny rano maloto vitsivitsy mikoriana mankany ao anaty renirano” no hitany fa fahavalo sy firaisana tsikombakomba hanonganana azy ireo. Nitsikera ny vaovao mifanohitra navoakan'ny manampahefana momba ny fisamborana ihany koa izy, raha nilaza hoe:
Miatrika izany izahay amin'ny fomba tokana tena ahitana ny: fivondronana indray, ny fandrindrana indray ny paikady, ary mandroso hatrany, amin'ny fomba tsara kokoa sy tapa-kevitra kokoa noho ny teo aloha.
Nilaza i Gonzalez-Davidson fa tsy afaka milaza ny isan'ny mpikambana ao amin'ny Mother Nature izy noho ny “antony ara-piarovana”. Mikasika ny famatsiam-bola dia nambarany fa ny fanomezana an-tsitrapo sy ny fiantohan-tena, ary koa ireo Kambodziana (any ivelany sy ao amin'ny firenena) izay maniry ny hahita firenena tsara kokoa no “loharanom-bola lehibe ananan'ny vondrona.” Nilaza i Gonzalez-Davidson fa:
Raha mbola mitantana ny fanjakana ny fitondrana Hun Sen dia mbola mitohy eo ambany fandrahonana izay olona na vondrona sahy milaza ampahibemaso fa ny roa sy roa mira efatra.
Nilaza i Am Sam Ath, mpitantana ny fanaraha-maso ao amin'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Licadho fa midika fampitahorana ny fisamborana. “Mahita izany ho hazalambo sy fandrahonana ho an'ireo mpikatroka amin'ny tontolo iainana izahay,” hoy izy.
Nanamarika ihany koa i Sam Ath fa nitranga taorian'ny fihaonana teo amin'ny ambasadaoro Amerikana Patrick Murphy sy ny Minisitry ny Atitany Sar Kheng momba ny fanenjehana ara-pitsarana ireo mpikatroka tontolo iainana ny fisamborana farany.
Tamin'ny 17 Jona, namarana ny fanampiana ho an'ny sampan-draharaham-panjakana i Etazonia mba hiarovana ny fonenan'ny biby ao Prey Lang mba hanomezana izany ho an'ny fiarahamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina ary ny fandraisana an-tanana eo an-toerana.
Taorian'ny fanamelohana ireo mpikatroka avy ao amin'ny Mother Nature miisa telo voasambotra tamin'ny volana lasa teo, dia nandefa hafatra an-tserasera ny masoivoho Britanika, Amerikana ary Aostraliana nanamafy fa zon'olombelona ny maneho hevitra am-pilaminana momba ny olan'ny tontolo iainana.
Hoy i Sam Ath hoe:
Eo ambany fandrahonana sy fampitahorana ireo mpikatroka tontolo iainana rehetra. Tsy fantatray izay karazana porofo ananan'ny manampahefana na [inona] ilay heloka bevava, fa raha mijery ny hetsika ataon'izy ireo teo aloha tao amin'ny tambajotra sosialy sy teny ifotony izahay [dia] izany no hetsika ho fiarovana ny tontolo iainana. Natao hanapotehana ny fisainan'ny olona te hiaro ny tontolo iainana, toa an'ity vondrona ity izany.